Ụlọ akwụkwọ - iSearch
Kwa afọ n'oge okpomọkụ, ihe karịrị ọkara nde ụmụ (na nne na nna ha) na-amalite usoro ndụ ọhụrụ na agụmakwụkwọ ha. Maka ndi nne na nna, uzo ulo akwukwo abughi nani uche - mgbe nile, ha aghaghi ikwe ka umuaka ha gakwuo ntakiri mgbe ha gụsịrị akwukwo na ulo akwukwo. Ọtụtụ ndị nne na nna na-echegbu onwe ha banyere usoro a na-eme kwa ụbọchị na ajụjụ nke ezi mkpali mmụta. Ma na nkwadebe dị mma na ngwa ụlọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị na gị na nwa gị ga-enwe ike ịma nsogbu ndị a!
Kedu ka ị ga - esi nyere ụmụ aka aka ịchọta ụzọ ha n'ụlọ akwụkwọ?
Ajụjụ kacha mkpa ugbu a bụ otu esi enyere nwatakịrị aka ịbanye n'ụbọchị akwụkwọ. Ọnụ ụlọ akwụkwọ chọrọ ka nnukwu mgbanwe site na ụmụ akwụkwọ praịmarị. N'ikpeazụ, onye anaghị ekwu banyere ụlọ akwụkwọ dịka "mkpa nke ndụ". Nwa gị ga - enwezi ọzụzụ ugbu a karịa ka ọ dị na ụlọ akwụkwọ ọta akara. Karịsịa n'oge oge mbụ, a ga-esonyere nhazi usoro a maka mkpa ntụrụndụ na oge egwu. Atụmatụ ndị a nwere ike inyere gị aka mee ka mgbanwe dịrị nwa gị mfe:
Enweghị oge zuru ezu
Ọ bụrụ na nwa gị rịọrọ maka usoro ntụrụndụ zuru oke n'oge ọ na-enweghị ohere na ụlọ akwụkwọ ọta akara, ndị ọzọ nwere ike ugbu a bụ ikpe. Nchebara na ịdọ aka ná ntị chọrọ na klas na nkuzi nkuzi siri ike nwere ike iduga n'ọtụtụ dị mkpa maka ntụrụndụ. Debe ihe omume ntụrụndụ doro anya ma nye nwa gị ohere maka egwu na ntụrụndụ n'efu. Ịkwesịrị ịhazi oge karịrị ụbọchị abụọ maka klọb egwuregwu ma ọ bụ nkuzi egwú na mmalite.
A na-eme kwa ụbọchị
Iji mee ka nwa gị mara na ị ga-aga akwụkwọ, ị kwesịrị ịnye ụbọchị kwesịrị ekwesị. Oge niile maka ihe omume ụlọ na egwu egwu ga-eme ka nwatakịrị mee ka ọ dị mfe iji usoro ọhụrụ ahụ mee ihe. A na-edozi nri ụtụtụ nwatakịrị maka ụbọchị mbụ n'ụbọchị.
Ọtụtụ ndị nne na nna weghaara oge ọrụ ha na ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ. Otú ọ dị, ọbụlagodi na a na-ahazi nlekọta ụmụaka, ọrịa nwatakịrị nwere ike imebi ụbọchị ọrụ. Ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmepụta atụmatụ na-agafe agafe oge maka ọrịa ahụ. Ọ bụrụ na enweghị nne na nna ochie nwere ike inyere aka na obere oge, nlekọta mberede nwere ike ime site na ọrụ ezinụlọ nke a na-enye ugbu a n'ọtụtụ obodo.
Tinye onwe gị!
Site n'ikere òkè na nzukọ ndị nne na nna, ị ga-amata ụmụaka, ndị nne na nna na ndị nkụzi, a ga-agwa gị gbasara ihe ọmụmụ ụlọ akwụkwọ na-abịanụ, a ga-agwakwa gị banyere arụmọrụ na nsogbu ndị nwatakịrị ga-enwe n'oge mbụ. Iji nwee ike ịrụ ọrụ maka ọdịmma ụmụaka na iji nwekwuo mmetụta, ị nwekwara ike ịme ka nne ma ọ bụ nna.
Ngwa ụlọ akwụkwọ ziri ezi
Egwuregwu ụlọ akwụkwọ ziri ezi dị mkpa karịsịa maka ịmalite ụlọ akwụkwọ. Ọ na-emezu ihe i-Dötzchen bụghị nanị na nganga akpatre nke Ukwu ahụ. Ọ na-akwalite ọṅụ nke mmụta. Ọ bụghị naanị n'ihi nke a, nwa ahụ ga-etinye aka na nhọrọ nke Ranzens. Ke adianade do, ọnụnọ nke nwa mgbe ịzụ akpa dịkwa mkpa iji hụ na ya na-optimally emegharị ka ọnọdụ ahụ ike nke nwa gị. Banyere size na ibu n'etiti iche iche na ụdị nnukwu iche na a ga-atụle iji zere ihe ọjọọ postcho n'etiti ndị ọzọ. ma oche na size nke akpa bụ ya mere oké mkpa iji hụ na a ọma niile-gburugburu echiche nke nwa n'okporo ụzọ. Akpa na-anọdụ ala ma ọ bụrụ na ọnụ ya dị elu dị elu. Maka ergonomic kwesịrị ekwesị, ya onwe ya kwesịkwara ịnọ nso n'anụ ahụ. Maka umuntakiri a na-eji obi ụtọ eme ihe, enwere ụdị ìhè na nke dị warara. Otú ọ dị, onye na-emepụta ya ekwesịghị ịzọpụta ya na nkwụsi ike iji nweta oke dị arọ. Iji chekwaa akwụkwọ nchekwa azụ ma ọ bụ karịsịa satchels dị warara na-ejikarị plastik. Enwere ike ịtinye ngwa ngwa ahụ. Na niile ibiere na-atụle ma onye na-ekwesịghị ichefu: Ebe ọ bụ na ụlọ akwụkwọ na akpa maka n'afọ ọzọ ga-abụ kwa ụbọchị enyi nke nwa gị, ọ ga-ekerekwa bụchaghị na oke nke ihe nlereanya na agba atụmatụ. Ka o sina dị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ntụgharị uche dị mma na nke ejiji. Na-ewu ewu taa katuunu agwa ike echi agaghịkwa fashionable, na ke kasị njọ na-ihe njakịrị.
Ntuziaka bara uru maka ịzụta akwụkwọ kwesịrị ekwesị na-enye gị nduzi anyị!